Team Management - Gaa na ndị ọkachamara na nchọpụta pụrụ iche
Home » Ndị ọkachamara n'ọchịchị
Brenda bụ onye ahịa na onye na-emepụta ihe. Ọ na-enye ikikere ụlọ ọrụ ala ụlọ ahịa na North Carolina, Pennsylvania, na Maryland, ma bụrụ onye Realtor maka ihe karịrị afọ 26. Tupu ya arụ ọrụ dịka Director of Marketing na New York Stock Exchange, o nwere ma jikwa ụlọ ọrụ abụọ jikọtara aha nkụ ọkụ na Long Island na New York. Na 1991, ọ nwetara akwụkwọ ikikere NY ya ma nweta oke ọrụ n'ụlọnga na ụlọ ọrụ abụọ aha mba.
Na 1995 o kere ma kpọọ "Specials" "," Njirimara nke Njirimara Pụrụ Iche maka ndị na-ahọrọ ihe si na nkịtị, ihe mmeri, niche, azụmahịa ụlọ ahịa. Ọ gbanwere ọrụ ahịa ya n'ime ọrụ bara uru maka ndị nwe ụlọ, dịka onwe ya, ndị na-enwe nsogbu mgbe ha na-ere ihe pụrụ iche ma dị iche iche.
Jim Skinner, Onye isi ọrụ - Broker
Jim aghọwo Onye guzobere, Onye isi, na onye isi nke Terregena Inc. abanye na Canada na United States. Ọ bụ onye otu na Board of Advisors of The Forge na McMaster University na Hamilton, Canada; onye na-enye ndụmọdụ na Canada Federal Government Economic Development Agency; na, bụ onye otu na Board of Advisors of the Impact Consulting Group na Rotman School nke Management na Mahadum Toronto.
Ọ bụ onyeisi oche nke ụlọ ọrụ atọ - otu ọha na eze, mmadụ abụọ na nzuzo na otu Onye Nchịkwa nke ọtụtụ ndị ọrụ ọha na eze na ndị nwe ụlọ ọrụ ndị ọzọ tinyere onyeisi oche nke Kọmitii na Nkwekọrịta Nhọrọ na otu Onye Nlekọta Ego.
Jim aghọwo onyeisi na ndị isi nke ụlọ ọrụ atọ na-ere ahịa n'ihu ọha na onye na-eso ụzọ na mmalite na ọganihu nke ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ọ bụ onye isi oche nke ụlọ ọrụ asaa na-arụ ọrụ mgbe ọ na-eje ozi dịka Onye isi oche, Onye isi na-ahụ maka ndị isi na onye isi na onye isi oche nke ahịa na ahịa maka ụlọ ọrụ dị iche iche gụnyere Philips Medical Systems na Becton Dickinson. Johnson na Johnson na Bayer.
Jim bụ onye a tọrọ ntọala nke Board of Directors and Executive Committee of the Biotechnology Industry Organisation, onye otu na gọọmentị Akwụkwọ Akwụkwọ nke Advisors na North Carolina State University na họpụtara Gọvanọ James B. Hunt dị ka onyeisi oche nke North Carolina Entrepreneurial Development Board. Ọ bụ onye gụsịrị akwụkwọ na mahadum Ryerson, Mahadum York na University of Toronto.
Paige Thompson, Onye isi oche Western NC - Broker
Site na ahụmahụ ọtụtụ ọrụ, Paige na-enye ndị ọrụ nlekọta nke "Nchọpụta ..." ihe ọmụma zuru oke banyere ego, ezigbo ụlọ, ahịa, na njikwa. N'ime afọ 23, na-agafe n'etiti ahịa ahịa kachasị elu n'ụwa, New York Stock Exchange, VP, Head of New Listings, Paige na-agba ọsọ naanị Exchange, ntinye ego na-enweta ego, na-arụ ọrụ arụmọrụ kwa afọ. Ndi otu ndi mmadu jiri aka ha natawanye ihe ndi ohuru site na 128, otu afo, na 279, afo asatọ, karia ugboro ole ndi mmadu na-acho ya, ndi mmadu weputara umuaka 1,684, nke na-anọchite anya 58% nke ulo oru NYSE. njedebe njedebe 1996, ma dị n'okpuru 40% nke NYSE ngụkọta ahịa ego. Na 1997, Paige guzobere ụlọ ahịa mbụ na-abụghị NYC, na Silicon Valley, na-etinye ntọala maka mwakpo dị elu megide onye kasị asọmpi Exchange na obi nke ebe siri ike ya.
N'ịlaghachi New York, Paige nọgidere na-akpakọrịta ya na Wall Street, na-arụ ọrụ nke SVP, Nkọkọrịta Njikọ & Ọhụrụ Business na Ndị Ọkachamara Ọkụ, ụlọ ahịa NYSE ahịa kacha elu. Ọrụ Ndị Ọkachamara Ọkaibe bụ ịmepụta uru ahịa ma, n'otu oge ahụ, na-eme ka ahịa dịwanye elu na ụlọ ọrụ ya. Dị ka SVP, Njikọ Mmekọrịta & Development Business, Paige na-eduzi mmekọrịta ndị ụlọ ọrụ na-agba ọsọ na Nlekọta 300, tinyere ndị isi ụlọ ọrụ (CEOs, CFOs, & IR Directors) nke ụlọ ọrụ isi ahịa, gụnyere General Electric, Goldman Sachs, Home Depot na 65 ndị ọzọ na S & P 500 ụlọ ọrụ. Paige abụrụla Onyeisi nke Pụrụ Iche na-anọchite anya ndị ahịa na-azụ ahịa n'ime ngalaba ego na nchọta ha maka ndị isi ụlọ ọrụ, ọkachamara, na ndị na-emepụta ihe.
Paige sonyere "Special ..." dị ka Broker-in-Charge nke Asheville, ụlọ ọrụ NC na 2001 na-ekere òkè na-akpali akpali ma na-anọgide na-eto nke ụlọ ọrụ a pụrụ iche.
Irwin Gretczko, Onye isi oche New York - Broker
Irwin bụ onye na-ere ahịa ụlọ ahịa na onye na-ere ahịa ọtụtụ afọ. Ọ na-ejide ikikere ikike na New York. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-etinye otu patent US Patent na ngwa ndị echere na ndị ọzọ. O mepụtara usoro mmemme nke pụrụ iche maka arụmọrụ azụmahịa na nzukọ nke enyerela na ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye na ihe ọmụma na ọkachamara na ụlọ ahịa New York, ọ na-eweta Nkà na ụzụ mmepụta ihe na "usoro nyocha" pụrụ iche maka ijikwa azụmahịa anyị.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Master's degree na Science na Education na Bachelor degree na Physics si University University nke New York, ọ kụziiri nkà mmụta sayensị dị elu tupu ya abanye n'ime ụlọ ya.
James Scott Skinner, Onye isi ego na onye isi ego
James Scott Skinner, CPA, CMA, MBA, B. Comm., Bụ onye isi ụlọ ọrụ ego. Ọ na-enwe ọkwá dị elu dị ka Onye Ọchịchị na ọtụtụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche ebe ọ na-elekọta ngalaba ego na ụlọ ọrụ nchịkwa ma bụrụ maka ọrụ nchịkọta ego, atụmatụ achụmnta ego, nkwado na ịkọ akụkọ ego.
Ọ na-enweta akara mmụta Bachelor nke Ọkwa ahịa na nchịkwa Ọchịchị nke Business na isi ihe abụọ dị na akụ na ụba na ego azụmaahịa si Mahadum Toronto, Canada. Jim bụ onye otu na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị na - ahụ maka akwụkwọ njikwa - onye njikwa akwụkwọ njikwa (CMA) ma na - enye akwụkwọ ikikere na nkwenye mbupụ, isii Sigma Green Belt Training and Management Essentials (Training Leadership).